चीन चाँडै चुनाव चाहन्छ : मन्त्री महत | newsnepali.com
चीन चाँडै चुनाव चाहन्छ : मन्त्री महत
Published on: Thu, Mar 30th, 2017 By Sushil Dahal
काठमाडौं : साताव्यापी चीन भ्रमण सक्ने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मंगलबार चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत आइपुगेका छन् । चीनको हाइनानमा आयोजित बोआओ फोरम फर एसिया सम्मेलनमा सहभागितापछि प्रधानमन्त्री दाहाल शनिबार बेइजिङ पुगेका थिए । दाहालले भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ तथा उपप्रधानमन्त्रीद्वय झाङ गाओली र वाङ याङसहित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ तावसँग बेग्लाबेग्लै भेट गरे । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण टोलीमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग चीन भ्रमणबारे अन्नपूर्णकर्मी सन्तोष घिमिरेले मंगलबार गरेको टेलिफोन कुराकानीको सारसंक्षेप :
१. प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण कस्तो हुँदैछ ?
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा हामी आजै मात्र तिब्बतको ल्हासा आइपुगेका छौं । भ्रमणमा चीनसँग कुनै नयाँ सन्धिसम्झौता नहुने हामीले भ्रमणअघि नै भनिसकेका थियौं । सोहीअनुसार भ्रमणमा कुनै नयाँ महत्वपूर्ण सन्धिसमझदारी भएनन् । तर यो भ्रमणमा चिनियाँ नेतृत्वको उच्च तहसँग भएका भेट र छलफलले दुई देशको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउन महत्वपूर्ण बनेको छ । भ्रमणमा भएका भेटवार्ता र छलफलले नेपाल-चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ बढी विश्वासिलो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको विश्वास हामीले राखेका छौं ।
२. चिनियाँ उच्च नेतृत्वसँग मूलत: के विषयमा कुराकानी भए ?
प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपति तथा दुईजना उपप्रधानमन्त्रीसँग भएका छलफल खासगरी चीन-नेपालबीच पूर्ववर्ती सरकारका पालामा हस्ताक्षरित पारवहनलगायत सहमति-सम्झौता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे छलफल भए । हामीले ती सहमति र सम्झौता अक्षरश: पालना गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनायौं ।
चीनले नेपालसमक्ष प्रस्ताव गरेको वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) अवधारणामा नेपाल सहभागी हुने विषयमा चिनियाँ नेतृत्वसँग छलफल भयो । प्रधानमन्त्रीले नेपाल ओबीओआर अवधारणामा चाँडै सदस्य बन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ओबीओआर अवधारणामा सहभागी भएर नेपाल लाभ चाहन्छ भन्ने कुरा हामीले राख्यौं । चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दाहालले सोही भेटमा ओबीओआर अवधारणामा नेपालको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि थप छलफल गर्न सम्बन्धित सरकारी अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । नेपालको चीनसँगको व्यापारघाटा कम गर्न नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा शून्य भन्सार सुविधा उपलब्ध गराइदिन हामीले आग्रह गर्यौं ।
३. आसन्न स्थानीय निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनबारे चीनको चासो कस्तो छ ?
चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा उहाँले नेपालको शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक -सामाजिक विकासमा चीनको सहयोग जारी रहने बताउनुभयो । आपसी विश्वास बलियो पार्दै जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय चुनाव घोषणा गरिसकेको अवगत गराउँदै संविधान कार्यान्वयनमा चीन, भारतलगायत छिमेकी राष्ट्रको सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । चीनले नेपालमा स्थानीय तह चुनाव चाँडै होस् भन्ने चाहेको हामीले पायौं । चिनियाँ राष्ट्रपतिले स्थानीय चुनावका लागि लजिस्टिक सहयोगस्वरूप ९ मिलियन युआन सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
४. चीनबाट उच्च तहको नेपाल भ्रमण हुन सकिरहेको छैन । यसबारे चिनियाँ पक्षको भनाइ के छ ?
प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणमा आउन फेरि आग्रह गर्नुभएको छ । विगतमा हामीले उहाँलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिइसकेकै छौं । चिनियाँ राष्ट्रपतिले दुवै पक्षको छलफलमा उपयुक्त समयमा आफूले नेपाल भ्रमण गर्ने बताउनुभयो ।
५. भूकम्पपछि तातोपानी नाका खुल्न सकेको छैन । यसबारे के छलफल भयो ?
चिनियाँ पक्षले तातोपानी नाका चाँडै खोल्न काम भइरहेको जानकारी दिएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका प्रमुखसँग आज भएको कुराकानीमा पनि तातोपानी नाका फेरि सञ्चालनमा ल्याउनेबारे छलफल भयो । उहाँले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी तातोपानी नाका फेरि सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । तिब्बत र नेपालबीच व्यापार, पर्यटन, सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्ने र सांस्कृतिक क्षेत्रमा कसरी सहयोग बढाउने भन्नेबारे कुराकानी भयो । चीन जोड्ने स्याफ्रुबेसी—रसुवा तथा तातोपानी नाकाको स्तरोन्नति र सुधारबारे गहन छलफल भएका छन् ।
६. विगतमा चीन-नेपालबीच भएका सहमति, सम्झौता कार्यान्वयनमा अब सरकारले के गर्छ ?
राजनीतिक तहमा भएका सहमति र सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी स्तरमा बैठक गर्नु आवश्यक हुन्छ । चिनियाँ पक्षसँग हामीले सचिवस्तरीय बैठक नियमित गर्नेबारे कुराकानी गरेका छौँ । अब चाँडै चीनसँग परराष्ट्र सचिवस्तरमा बैठक गरेर विगतका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ ।
७. चीनसँग बढेको अविश्वास हटेको हो त अब ?
चीनसँग हाम्रो समझदारी र विश्वास सदैव रहँदै आएको छ । चीन हाम्रो निकट छिमेकी राष्ट्र हो । हामी एकअर्काका साझा हित र स्वार्थमा प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्नेबारे भ्रमणमा कुराकानी भएको छ । एक चीन नीतिप्रति नेपालले स्पष्ट रूपमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । चीनसँगको सम्बन्धमा अझ बढी विश्वास बढेको अनुभूति भएको छ । भारतसँग जसरी हाम्रो विश्वासको सम्बन्ध छ त्यसैगरी चीनसँग पनि विश्वासको वातावरण बनेको छ । उहाँहरूले पनि भारतसँग नेपालको राम्रो सम्बन्ध रहोस् भन्ने चाहना राख्नुभएको छ ।